Ewula uzo abuo nke abuo n’ọdụ ugbo elu nke atọ amalitebeghị | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 Istanbul3. 2 na ọdụ ụgbọelu. usoro ịgba ọsọ agbabeghị amalite
3. 2 na ọdụ ụgbọelu. usoro ịgba ọsọ agbabeghị amalite
07 / 03 / 2017 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey
3 n'ọdụ ụgbọ elu. ihe owuwu nke uzo a amaliteghi: Owuwu nke uzo mbu nke ato ka emechaala n'ọdụ ugbo elu nke ato, nke a na-arụ n’otu ọsọsọ. Ọrụ owuwu maka ọnụ ọnụ na-aga n'ihu n'ike n'ike yana mbata nke oge opupu ihe ubi. Ebumnuche maka oghere ahụ, 2 February 26.
Mgbe a na-eme ọmụmụ ndị a niile, enwere mkparịta ụka gbasara runway. 3 dị ka atụmatụ si dị. A ga-emeghe ọdụ ụgbọ elu ya na okporo ụzọ abụọ dị n'akụkụ abụọ nke dị na ndịda ugwu (ntụziaka 18-36). Wayszọ ndị a dị warara n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke isi ọdụ. E wuchara ihe owuwu nke uzo mbu. Agbanyeghị, iwu nke okporo ụzọ nke abụọ amalitebeghị.
Na ọkwa nke weebụsaịtị onye ọrụ IGA, Faz1A na-agbanye Faz2018B mgbe emeghere 2 ya na 1 runway na njedebe nke 2020. 3 mechara XNUMX. Wayzọ a na-agba n'okporo ụzọ ga-adị na mpaghara ugwu-ndịda n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ọdụ ọnụ.
Ngalaba 3, akụkụ nke ọwụwa anyanwụ ga-abụ 4 runway na-ezubere ka njedebe nke 2022. A na-akpọkwa ya north-south 4 na north north. He'bal way run way.
G HANPP Na-eme MGBE AHIN KWES .R CH .BỌCH.
Otu n'ime ajụjụ ndị a jụrụ na nke a bụ ntụzi nke ikuku na-agbanwegharị na Istanbul. N’ihi mgbanwe ndị dị na ntụgharị nke ikuku n’afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-eji runway nke 05 / 23 na-eme ihe ike, dịka ọmụmaatụ n’ọdụ ụgbọ elu Atatürk. Ejiri ikike ahụ rụọ ọrụ nke ọma na atụmatụ nke usoro nke agbago n'okporo ụzọ awara awara na ụzọ 05 / 23 na ọpụpụ n'okporo ụzọ awara awara na ụzọ nke 17 / 35.
Ekwuputara na mgbanwe ndị a na ifufe butere Turkish ụgbọ mmiri na IGA. DY KA, 'ọrụ ịba ụzọ abụọ nke ndịda-ndịda nwere ike ibute nsogbu ahụ site na ọrụ ahụ,' ka o kwuru na uzo 05 / 23 nke arịrịọ ka emee ka ọ bụrụ ihe mbụ, IGA ebido ọmụmụ banyere isiokwu bụ n'etiti ozi ahụ.
3. Ihe mere na iwu nke ọdụ ụgbọ elu amaliteghị
Arụ ọrụ traktị Eskişehir kwụsịrị ma ọ bụ amaliteghị ma ọlị?
Ihe kpatara ịrụ ọrụ iji meziwanye ihe ndị dị n'èzí anaghị amalite
CHP'li Gok: "Ankara-Polatli Regional Train Expeditions Gịnị mere na amaliteghị?"
Ụzọ nke abụọ ga-emeghe na Sabiha Gökçen Airport
2 gaa na Sabiha Gokcen Airport. ọzọ runway
2 gaa Sabiha Gökçen Airport. runway
Trabzona ụgbọ okporo ígwè na ụzọ nke abụọ ga-abịa
Middle East & Africa Rail Gosi na a ga-eme na October
Mbụ egwu ala maka usoro OMU tram na Samsun